Forello Tanjombato Kilan’ny afo ny orinasa mpanao lamba iray
May ny orinasa mpanao lamba iray eny amin’ny Forello Tanjombato. Orinasa afaka haba mampiasa mpiasa marobe izy io, raha ny fantatra. Omaly maraina tokony ho tamin’ny 05 ora sy 05 minitra no nitranga ny loza noho ny antony tsy fantatra.
Fiara lehibe efatra an’ny sampana mpamonjy voina no indray niainga namonjy ity orinasa ity, nahitana vatan-dehilahy miisa 24. Ny roa tamin’ireo raha dia avy any Andravoahangy sy Anosivavaka no nohafarana fa avy ao Tsaralalana ny roa ambiny. Tamin’ny 10 ora maraina vao voafehy ny afo raha ny vaovao azo. Tsy nisy kosa ny aina nafoy na ny olona naratra. Lamba maro kosa no lanin’ny afo. Efa eo am-panaovana fanadihadiana ny polisy ekonomika hatramin’ny omaly. Nomarihin’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny sampana mpamonjy voina fa fotoana tena mampahazo vahana ny hain-trano ny tahaka izao ka mila mitandrina ny tsirairay. Mikasika ireo mpiasa ao amin’ity orinasa iray ity indray dia anisan’ny adin-tsaina mitambesatra amin’izy ireo ny asa famelomany vady aman-janaka na hitohy na tsia izay tafiditra tanteraka ao anatin’ny fanomanana ny fidiran’ny mpianatra.